ဝါယာကြိုး, သံဝါယာကြိုး, သတ္တုကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး, သွပ်ရည်စိမ်သံဝါယာကြိုး - Fuhai
ပလပ်စတစ် Window ဖန်သားပြင်
Gabion Box ကို
Expanded သတ္တု mesh
welding ကျောက်ခေတ်ကေ့ Net က
က Wall Spike
Filter ကို mesh
သံဝါယာကြိုး & ဝါယာကြိုးကွက်
အကောငျးဆုံး SERVICE ကို
18X16 အစိမ်းရောင်အရောင်ဖန်မျှင်ထည် Window ကိုစစ်ဆေးခြင်း
welded ကွက်ခြံစည်းရိုး-Hot-သို့ကျဆင်းလာ 358 ခြံစည်းရိုးအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
358 ဂဟေ mesh လုံခြုံရေးဓားရေးပြိုင်ပွဲ
ကစားကွင်းသည် PVC Cote Chain Link ကိုခြံစည်းရိုး Rolls
2.7mm Riverside မှ Prote သည် Gabin mesh အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ...
FUHAI င်း၏လမ်းညွှန်အဖြစ် "အတူတကွဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အကျိုးအမြတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်, စီမံခန့်ခွဲမှုစုံလင်" ကြာ, ယင်း၏သဘောတရားအဖြစ် "အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဦးစားပေးမည်ဝန်ဆောင်မှု" စဉ်းစား, "ရိုးသားမှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုကုသ" ၏အဓိကနိယာမကပ်လျက်။
လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ်ဟော့သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ Grid ပြားနှစ်ပြီးသော
High Quality 304 သံမဏိဝါယာကြိုး
Annealed သံမဏိဝါယာကြိုး / သွပ်ရည်စိမ်သံဝါယာကြိုး
Window ကိုစစ်ဆေးခြင်း Choose စေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ပလတ်စတစ် Window မျက်နှာပြင်ဖန်မျှင်ထည် Window ကိုစစ်ဆေးခြင်း, ရှိပါတယ်, ဝါယာကြိုးကွက်, လူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးကွက်ဘုရင်ဟောင်ကောင်မျက်နှာပြင် mesh အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထုတ်ကုန်အမြဲ Window ကိုစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရနေကြသည်။ ထိုအခါပြတင်းပေါက်စိစစ်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို? ဒီနေရာတွင်ဤထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ပါတယ် ...
Window ကိုစစ်ဆေးခြင်း Choose စေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကွင်းဆက် Link ကိုခြံစည်းရိုးလည်းကြေးနန်း coated အရည်အသွေးကိုပူ၌နှစ်ပြီးသောသွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ် PVC နှင့်အတူထုတ်လုပ်စိန်ကြေးနန်းကွက်, ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ link ကိုခြံစည်းရိုးအလွန်လည်ပင်းညှစ်သတ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုတှနျးလှနျနိုငျသညျ။ အဆိုပါခြံစည်းရိုးဟာပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ခိုင်မာတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရန်။ ကွင်းဆက် Link ကိုခြံစည်းရိုးပုံမှန်အားအသုံးပြုပါသည် ...
ကွင်းဆက် Link ကိုခြံစည်းရိုး / စိန်ကြေးနန်း mesh
Liusu စက်မှုပန်းခြံ, Dingzhou စီးတီး, Hebei ပြည်နယ်, တရုတ်
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. သိကောင်းစရာများ - Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
သံမဏိ Crimped ဝါယာကြိုးကွက်, ဆူးဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုး, အနိမျ့ကာဗွန် Link ကိုခြံစည်းရိုး , ဆူးဝါယာကြိုးနှင့်အတူ Chain Link ကိုခြံစည်းရိုး , သင်တုန်းဆူးဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး , လယ်ယာများအတွက် Chain Link ကိုခြံစည်းရိုး ,